Apple inogona kudzoka kune yekuteerera ine nyowani iPod Hi Fi neApple Music | Ndinobva mac
Apple inogona kudzoka kune yekuteerera ine nyowani iPod Hi Fi neApple Music
Mavhiki mashoma apfuura takakuudza kuti sei apuro yaigadziridza Apple Store paFifth Avenue muNew York kuti ive nenzvimbo yakawanda yekushandisa pfungwa itsva yechitoro nemamwe makosi evashanyi uye kubatanidzwa, kekutanga, kubva kuredhiyo studio kutepfenyura paBeats 1.
Uyu mumwe muenzaniso zvakare kuti Apple haidi yayo yekushambadzira mimhanzi sevhisi kuderera. Iwe unoda vanyori vanowedzera uye vakawanda kuti varambe vachiuya, uye iwe unoda kukurudzira izvo nekuita kuti vanhu vauye kune iyo inoshamisira Apple Chitoro. vanogona kutarisa uye kutora chikamu muzviratidziro zvinofambisa paBeats 1.
Nekudaro, izvo zvatiri kuda kutaura newe nezve nhasi ndezvekuti Apple inogona kunge iri muchikamu chekupedzisira chechigadzirwa chitsva chaizoona mwenje munguva pfupi, mutauri mutsva uyo anoyeuchidza iyo iPod HiFi asi neruzivo rwekugona kubatana neApple Music sevhisi uye kugona kunakirwa nezvose zvirimo mariri pamwe nemubatsiri weSiri. Saka chingave chakangwara mutauri chaizouya kuzofukidza izvo Amazon inotarisira kuvhura munguva pfupi.
Nhau dziri kuitika pamambure dzinoratidza kuti Amazon iri kugadzirira kugadzirisa kweiyo Echo huwandu nekuvandudza uko kungaite iyo smart speaker par kugona, pakati pazvo patinogona kunongedzera kuiswa kweye-7-inch yekubata skrini uye mukana wekuti videoconferencing iri muFaceTime maitiro. Uyu anofungidzirwa mutauri weAmazon ari kudonha, saka Apple inofanirwa kucherechedza uye kuona kana ichizorega musika werudzi urwu rwechigadzirwa udye kana kumirira sezvawakaita neApple Watch uye ndokurova tafura woisa zvakare zvese zvakatenderedzwa .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Apple inogona kudzoka kune yekuteerera ine nyowani iPod Hi Fi neApple Music
Maitiro ekubvisa iwo maficha kubva kuDock kana isu tasarudza iyo kuzvivanza pachayo
Chinja mabatch mafaira ne batchCONVERTER